Sida loo Beddelaan FLAC in MP3 on Mac OS X (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Sida loo Beddelaan FLAC in MP3 on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
Raadinta lagu kalsoonaan karo oo ah si loogu badalo FLAC in MP3 on Mac OX S, si aad u ciyaari karaa FLAC for loo maqli karo guud ahaan on qalabka sida MP3 iPod ama codsiyada kale leheyn sida Lugood iwm? Haddii ay sidaas tahay, waxaad tahay qof nasiib badan halkan. Tutorial Tani aad ku socon doonaa, iyada oo FLAC in ay tallaabooyin MP3 diinta on Mac OS X si faahfaahsan (Snow Leopard, Libaaxa, Mountain Libaaxa ka mid ah).
Diinta FLAC in MP3 Mac OSX, waxaad u baahan tahay FLAC ah ugu fiican in MP3 Converter u Mac sida aad ku xigeen. Halkan, si adag Waxaan ku talinaynaa in ay Converter Audio u Mac , kaas oo kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo ka files FLAC in ku dhawaad ​​qaab kasta oo maqal ah sida MP3, regelingen, AIFF effortlessly iwm. Sidoo kale, waxa ay taageertaa Dufcaddii badalo FLAC in MP3 u Mac iyo badasha qaybaha gaarka ah ka files audio dheer la isticmaalayo function goo ah. Ma danaynaysaa? Ok, aynu bilaabi si loogu badalo ka files FLAC in MP3 on Mac OS X talaabo talaabo ah.
Taageerayaan Mac OS:
1. MAC OS X 10.4, MAC OS X Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.5.7, Mac OS X 10.5.8, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS 10.7 Libaaxa, OS X 10.8 Mountain Libaaxa, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10,10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan.
Talaabada 1: Download, rakibi iyo bilowno Mac OS X FLAC in MP3 Converter
Labada version Intel iyo version PowerPC waxaa laga heli karaa halkan. Just dooro version saxda ah si ay u soo baxdo iyo rakibi aad Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ah). Haddii aadan aqoon aad taas oo ka mid ah in la doorto, waxaad riixi kartaa Apple ah "icon, dooro About this Mac" doorasho si aad u hubiso processor computer aad.
Talaabada 2: Import FLAC files si FLAC in ay MP3 Converter Mac
Tag File "> dar Media Faylal ay" ka menu ugu weyn ee ay caleenta aad Mac disk adag tahay in ay doortaan files FLAC aad rabto in aad ku shuban ah. Ama waxaad si toos ah jiidi karaan hal ama dhowr bartilmaameed files barnaamijka halkii.
Talaabada 3: Dooro MP3 format sida wax soo saarka ay
Riix nooc qaabka hoose ee Murayaad barnaamijkan ee ugu waxyooda guddiga wax soo saarka, ka dibna tag Audio> "MP3". Si aad u hesho files wax soo saarka si fudud, waxaad sameyn kartaa buugga wax soo saarka. Si tan loo sameeyo, waxaad riixi kartaa Output bidix hoose ee suuqa kala barnaamijka lagu qeexi folder wax soo saarka.
Talaabada 4: Ku bilow diinta FLAC in MP3 Mac OS X (El Capitan taageeray)
Hit button badalo si FLAC bilaabaan in ay MP3 diinta on Mac OS X. Habka aad qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah, taas oo inta badan ku xiran tahay tirada dhammaan faylasha FLAC laga keeno iyo waxqabadka aad kombiyuutarka.
Hawlaha badan oo ku saabsan FLAC si MP3 Converter u Mac OS X,
• Dufcaddii badalo dhexeeya dhammaan noocyada kala duwan ee ah qaabab video caanka ah ee Mac for loo maqli karo ee qalabka kala duwan oo caan ah iyo codsiyada.
• Waraaqda audio ka videos in qaab kasta oo maqal ah sida MP3, FLAC, MKA, regelingen, AIFF iwm
• hawlaha tafatirka More qabow sida goo, dalagga, ku dar saamayn iwm
FLAC VS MP3,
FLAC waa qaab file u riixo xogta sameecadda audio ah. Waxay leedahay size file sare oo tayo sare leh. MP3 waa qaab tiga digital audio Deji isticmaalaya nooc ka mid ah riixo xogta lossy. Waa qaab caadi audio kaydinta audio macaamiisha, iyo sidoo kale heerka Qolyihii ah riixo audio digital ah ee suuqa kala iibsiga oo loo maqli karo ee music on ciyaartoyda audio digital. Marka la barbar dhigo MP3 , FLAC taageero loo maqli karo in qalabka audio qaadi karo iyo nidaamka audio dadaalka badan yahay xadidan. Sababo la FLAC ee size sare, dad door bidaan MP3 format ay size hoose oo waafaqsan dhowaad qalabka kasta.